I-Dubai eya e-Abuja naseLagos indiza inyuke nge-Emirates
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Dubai eya e-Abuja naseLagos indiza inyuke nge-Emirates
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula iNigeria News • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
I-Emirates izakubuyisela inkonzo yayo yesibini yemihla ngemihla eLagos kwaye iqhubeke nokusebenza kwidolophu elikomkhulu laseNigeria, e-Abuja, ngeenqwelomoya ezine ngeveki ukusuka nge-15 kuDisemba 2017.
I-Emirates ibhengeze namhlanje ukuba izakubuyisela inkonzo yayo yesibini yemihla ngemihla eLagos kwaye iphinde iqale ukusebenza kwidolophu elikomkhulu laseNigeria, e-Abuja, ngeenqwelomoya ezine ngeveki ukusuka nge-15 kuDisemba 2017.
Ngokufana nenkonzo yangoku yemihla ngemihla phakathi kweDubai neLagos, amaza ongezelelweyo aya eLagos aya kuqhutywa ngeenqwelo moya ze-Emirates 'zeBoeing 777-300ER, ezibonelela ngezikhuselo zabucala ezisibhozo kuKlasi lokuQala, izihlalo ezingama-42 zokulala ezilala kumgangatho weShishini kunye nezihlalo ezibanzi ezingama-310 kuqoqosho. Iklasi. Inkonzo ebuyiselweyo e-Abuja iya kuhanjiswa yi-Boeing 360-777 yezihlalo ezingama-300 kulungelelwaniso lweeklasi ezintathu.
“INigeria yintengiso ephambili ye-Emirates kwaye ukubaluleka kwayo kuboniswa yinto yokuba siza kongeza iinqwelomoya eziyi-11 ngeveki phakathi kweDubai nezixeko ezibini eziphambili eNigeria, e-Abuja naseLagos. Ezi ziindaba ezimnandi kubo bobabini abathengi bethu beshishini kunye nabathengi kunye nokuqaqambisa ukuzibophelela kwethu ekuboneleleni abahambi eNigeria kungekuphela nje ngezinto zakutshanje kubuchwephesha beenqwelo moya kodwa bandise noqhakamshelwano, utshilo u-Orhan Abbas, uSekela Mongameli oMkhulu wase-Emirates, ukuSebenza kwezoRhwebo, e-Afrika. "Sibulela abasemagunyeni baseNigeria ngokuququzelela ukubuyiselwa kweenqwelomoya zethu eziya e-Abuja naseLagos nezizakunceda kakhulu ukhenketho lwaseNigeria, urhwebo, utyalomali noqoqosho ngokubanzi."
Ngokusebenza kabini imihla ngemihla ukuya eLagos kunye neenqwelomoya ezine eziya e-Abuja, i-Emirates iya kubonelela abahambi eNigeria ngokufikelela okufanelekileyo kunye nokukhululeka ukuya eDubai, nangaphezulu ukuya kwezinye iindawo kwinethiwekhi ye-Emirates, kubandakanya ngaphezulu kweendawo ezingama-35 eMiddle East naseFar. EMpuma, iindawo ezili-18 eziseMzantsi Asia kunye neendawo ezingaphezu kwama-20 kwiindawo zaseMelika nase-Australia. Uninzi lwezi ndawo ziyahanjelwa yinqwelomoya ye-A380 yenqwelomoya.
Ngaphandle kwenani labakhweli elonyukayo, iinqwelomoya ezintsha ziya kubonelela ukuya kuthi ga kwiitoni ezingama-23 zomthwalo wempahla ngenqwelomoya, inika amashishini kunye nabarhwebi amathuba angakumbi okonyuka kokungenisa ngaphakathi elizweni okunje ngeempahla zombane, izixhobo zokwakha kunye namayeza, kunye nokuthunyelwa ngaphandle okufana nemveliso esitsha kunye nezinto ezinokutsha.
Inqwelomoya eyongeziweyo eLagos EK781 izakusuka eDubai yonke imihla ngo-0355hrs ize ifike eLagos ngo-0905hrs. Inqwelo moya ebuyayo EK782 izakusuka eLagos ngo-1240hrs ize ifike eDubai ngeyesibini ezingama-2255 Inqwelomoya i-Abuja EK785 izakusuka eDubai qho ngoMvulo, uLwesithathu, uLwesihlanu, nangoMgqibelo ngo-1035hrs ize ifike e-Abuja ngo-1535hrs. Inqwelo moya ebuyayo EK786 izakusuka e-Abuja ngo-1855 kwaye ifike eDubai ngo-0435hrs ngosuku olulandelayo. Ukufika kwenqwelomoya e-Dubai kulungiselelwe ixesha elifanelekileyo lokuhambisa ixesha elifutshane lokuhamba labathengi abaxhumeka kwiinqwelomoya zase-Emirates kusasa ukuya kwiindawo ezithandwayo ezinje ngeNew York, iHouston, iLondon, iBeirut, iSeoul, iTaipei, iSingapore, iBeijing, iShanghai, iGuangzhou. , Mumbai, Delhi naseSydney, phakathi kwezinye izinto, ezizizixeko ezithandwayo kubahambi baseNigeria.
Abathengi kwi-Emirates banokujonga phambili kubantu abadumileyo kwinkonzo yebhodi kunye nokubuk 'iindwendwe kubasebenzi bayo beekhabhathi ezahlukeneyo kubandakanya nabaseNigeria, kunye nokonwabela izidlo eziphefumlelweyo zommandla nakwamanye amazwe kunye neziselo ezincedisayo. Abakhweli banokuyonwabela imbasa ye-Emirates yokuphumelela inkqubo yokonwabisa umkhenkce, inikezela ukuya kuthi ga kumajelo angama-2500 kwimiboniso bhanyabhanya, iinkqubo zikamabonwakude, umculo, iincwadi ezimanyelwayo kunye nomculo. Iintsapho ezinabantwana abancinci zikhathalelwe kakuhle ngeemveliso ezizodwa kunye neenkonzo zokuqinisekisa ukuhamba ngenqwelomoya nangokonwaba, ukusuka kwiithoyi zasimahla ukuya ekutyeni komntwana kunye nokuzonwabisa, kunye nokukhwela kuqala.
I-Emirates yasungula iinkonzo eNigeria nge-2 kaJanuwari 2004 ngeenqwelomoya ezine ngeveki ukusuka eDubai ukuya eLagos edibene neAccra eGhana, isebenzisa inqwelo moya eyiA330-200. Ngaphezulu nje konyaka kamva i-Emirates yonyusa iinkonzo zayo ukusuka kwiinqwelomoya ezine ukuya kwezintandathu ngeveki, kwaye kulandela enye imfuno, yaba yinto yemihla ngemihla ngo-Okthobha u-2005. Ngomhla woku-1 kuJanuwari 2006, iLagos yehliswa kwi-Accra kwaye yaba yinkonzo ethe ngqo eDubai. I-Emirates isebenze inkonzo yesibini yemihla ngemihla eLagos phakathi kukaFebruwari 2009 noJuni 2016 kunye neenqwelomoya imihla ngemihla eziya e-Abuja phakathi kuka-Agasti 2014 no-Okthobha u-2016. Ukusukela nge-15 kweyoMnga ngo-2017, i-Emirates iza kuqhuba iinqwelomoya ezili-18 ngeveki phakathi kweDubai neNigeria. Iziphelo-
Tsalela umnxeba% Sandy Barqawi% Thumela i-imeyile ku% Sandy Barqawi%
Iindawo zokufikela zitshiphu zithengisa eLouis ...
Abantu abathathu babulawa, i-3 ilahlekile eMiami condo yadilika
INtloko ye-WHO: I-COVID-19 yeLizwe lesiThathu i-Wave ilapha
Abanini babakhenkethi baseUganda babuhlungu ngenxa yokuphulukana nosihlalo wangaphambili ...